Isiphepho saseTropical: izici, ukwakheka nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Kwiplanethi yethu kunezinhlobo eziningi zemvula kuye ngesimo, imvelaphi kanye nemiphumela. Enye yazo yi- isiphepho esishisayo. Uhlelo lwesimo sezulu olunengcindezi ephansi lwaziwa njengesiphepho esishisayo lapho imimoya izungeza i-eksisi emaphakathi futhi iqukethe ukusakazwa okuvaliwe. Lokhu kwenza kube kubi kakhulu uma kunokulibala ngokuhamba kwesikhathi.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nesiphepho esishisayo, izici zaso, umsuka kanye nemiphumela.
2 Izinhlobo zesiphepho esishisayo
3 Ngemuva kwesiphepho esishisayo
4 Ukudangala eTropical, izivunguvungu namagama
Uma sikhuluma ngesiphepho esishisayo, sibhekisa ohlelweni lwezulu lapho izingcindezi eziphansi zidlangile khona. Imimoya inamandla impela futhi izungeza i-eksisi emaphakathi ekusakazeni okuvaliwe. Ngakho-ke, Zonke lezi zivunguvungu zithola amandla azo ekucineni komoya oswakeme osendaweni efudumele. Umnyombo walezi ziphepho ufudumele futhi udala ingcindezi ephansi ngoba umoya oshisayo uvame ukukhuphuka futhi ushiye isikhala engxenyeni ephakathi yomkhathi. Lokhu kwehla kwengcindezi kudala ukuthi wonke umoya ozungezile "ugcwalise" isikhala esishiywe umoya oshisayo.
Konke lokhu kudala ukunyakaza komoya okudala isivunguvungu sendawo eshisayo. Iziphepho zithola amandla okubanda komoya oswakeme futhi imvamisa zikhonjiswa yimvula enamandla kanye nemimoya enamandla. Ubukhulu kanye nezinga lokucekelwa phansi kwale mimoya kuyahluka ngokuya ngamazinga amandla anawo. Ngaphezu kwalokho, ngokuya ngamandla, izindawo ezihlasela indawo eshisayo zihlukaniswa neziphepho neziphepho noma iziphepho. Ezinye zeziphepho ezishisayo ngokuvamile zinkulu kakhulu ukuthi zingabonakala kumkhathi ongaphandle weplanethi. Lokho wukuthi, osomkhathi bangabona ezinye izivunguvungu ezishisayo ezisemkhathini.
Izinhlobo zesiphepho esishisayo
Kokubili isiphepho esishisayo luhlobo lwesiphepho esishisayo, kunezinhlobo ezithile ezithile zeziphepho ezenzekayo, njengoba igama lazo libonisa, ezindaweni ezishisayo. Iziphepho neziphepho ziwela kulesi sigaba. Ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zesiphepho esishisayo ezikhona:
Iziphepho ezingaphandle komhlaba: akhiwa ezindaweni ezingaphezulu kwama-degree angama-30 ngeziqu zomoya ezimbili noma ngaphezulu ezihlukile. Laba bantu banamazinga okushisa ahlukene.
Izivunguvungu zomhlaba: banokuphila okufushane futhi bavela ezindaweni ezibandayo.
Iziphepho ezingaphansi komhlaba: banezici eziphakathi phakathi kwezigaba ezimbili ezedlule.
Ngokuphathelene nokwakheka kwayo, isiphepho esishisayo senzeka ngesikhathi sekhwalithi yonyaka, ngoba sidinga inani elikhulu lemisebe yelanga. Zivame ukwenziwa olwandle lapho isiphepho esincane sithola amandla ekuhwamukeni kwamanzi afudumele ebusweni bolwandle. Imvamisa kwenzeka ngezikhathi lapho kunamazinga okushisa aphezulu noma imisebe yelanga eningi kakhulu. Konke lokhu kudala umphambili wamanzi afudumele futhi anomswakama okhuphuka abhekane nengaphambili lomoya obandayo lokho kubangela ukuthi zombili zizungeze kwi-eksisi ejwayelekile. Okushiwo ukuthi itholakala endaweni emaphakathi futhi yaziwa ngegama leso lesiphepho.
Isifunda siyaphinda njengoba isiphepho sithola amandla futhi sihambe. Ngale ndlela, kuvela imvula nemimoya enamandla. Iziphepho zaseTropical zithola amandla emanzini afudumele futhi ziphelelwa amandla emhlabeni. Isiphepho esishisayo yisimo semvelo semvelo esenzeka lapho imimoya emibili emanzi ihlangana ezimweni ezikhetheke kakhulu: umoya ofudumele nomoya obandayo "uyadudulana".
Ngakolunye uhlangothi, lapho bengena ezwenikazi, bathambekele ekuphelelweni amandla futhi baphele ngenxa yokuphazamiseka kokujikeleza kwemimoya eshisayo nebandayo.
Ngemuva kwesiphepho esishisayo
Iziphepho zaseTropical ziyakwazi ukuqeda izimpilo zabantu abaningi. Noma zingabi yiziphepho, iziphepho ezishisayo zingadala umonakalo omkhulu kubantu. Umthelela wazo ubonakala kakhulu ezindaweni ezisogwini, njengoba zingaphephethwa yimimoya enamandla, zingaguqula izinto, ziphakamise amagagasi asogwini noma zikhiqize izimvula ezinkulu ezingadala izikhukhula.
Konke lokhu kungadla izimpilo zabantu abaningi. Uma abantu bengazilungiselele futhi benake izimo zezulu ezimbi kakhulu, ukulahleka kwempahla kuvame ukuba nzima futhi ukubuyiswa kwezindawo ezithintekile kungathatha isikhathi eside. Kuyindida ukuthi, izivunguvungu nazo zinomthelela omuhle esimweni sezulu somhlaba: thwala amanzi emvula ezifundeni ezomile noma ezinesomiso. Ngakho-ke, ngokungaqondile bathuthukisa ukwenziwa umswakama kwamazwe obekungaba ukuhlupheka kube ugwadule, njengaseningizimu ye-United States noma iJapane.
Isiphepho esikhulu kunazo zonke emhlabeni senzeke ngasekupheleni kwehlobo, lapho ulwandle lufudumala. Yize isifunda ngasinye singaletha izimo zaso zesiphepho nezinkathi zonyaka, kubhekiwe ukuthi mayelana neziphepho, uMeyi uvame ukuba yinyanga engasebenzi kakhulu, kanti uSepthemba yinyanga ematasa kakhulu. Lokhu kungenxa yesimo sokujwayela. Ukuze amanzi asolwandle afudumele, kufanele achithe cishe lonke ihlobo. Ngale ndlela, ulwandle luzofudumala phakathi nenyanga kaSepthemba futhi luzodala izimo ezifanele zokudala isiphepho esishisayo.
Ukudangala eTropical, izivunguvungu namagama
Iziphepho zaseTropical zibizwa ngamagama ukuze zikwazi ukuwakhomba ohambweni lwawo, ngoba lokhu kusetshenziswa amagama abantu, abesifazane nabesilisa. Akhethwe ngokulandelana kwezinhlamvu zohlamvu lokuqala futhi aqhubeka ngokulandelana kwenkathi yesiphepho. Ngakho-ke, yenaowokuqala ubizwa ngo-A, owesibili ngu-B, njalonjalo.
Ukudangala kwezindawo ezishisayo kuphenduka izivunguvungu ngokuthola amandla. Ukudangala kwaseTropical wuhlobo lwesiphepho esishisayo olubuthakathaka olukhona. Umoya wayo unokusakazwa okuvaliwe okungafika kumamitha ayi-17 ngomzuzwana, yize imimoya ingafinyelela isivinini esikhulu. Uma izingcindezi eziphansi (ezibizwa kanjalo ngoba ziyifomula yezingcindezi eziphansi) zithola amandla okuhamba, zizoqhubeka zikhule zize zibe yiziphepho ezishisayo ezinesivinini somoya phakathi kwamamitha ayi-17 kuya kwangama-33 ngomzuzwana.
Iziphepho zinamandla kakhulu phakathi kweziphepho ezishisayo. Zivela ezivunguvungwini ezishisayo bese zithola amandla kuze kube isivinini somoya silingana noma seqa amamitha angama-34 ngomzuzwana. Ngokwesilinganiso sikaSaffir-Simpson, iziphepho zihlukaniswa ngamazinga ama-3, 4 noma ama-5 kuya ngamandla ale mimoya.
Iziphepho zenzeka ngezikhathi ezithile futhi zenzeka empumalanga, njengogu lwaseHong Kong. Leli gama lingasetshenziselwa ukuqamba ukucindezelwa, iziphepho kanye neziphepho ezishisayo, ngoba leli gama lisho isikhathi salezi zimo zezulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesiphepho esishisayo nezici zaso.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Isiphepho esishisayo